IMasai Mara, indawo ye-safari | Izindaba Zokuhamba
IMasai Mara, indawo okuyiwa kuyo e-safari
UMasai Mara kuhle indawo ye-safari futhi iheha abahambi abavela kuwo wonke umhlaba. Kulabo abajabulela izilwane ezinkulu, awukho umsebenzi ongcono kunokwenza i-safari emazweni ase-Afrika, ngaphansi kwelanga elishisayo lasemini nesibhakabhaka esihle esigcwele izinkanyezi ebusuku.
UMasai Mara unjalo eKenya futhi iyingxenye yesifunda esithandwa kakhulu, iSerengeti National Park. Uma elinye lamaphupho akho ukwazi i-Afrika, namhlanje sizokwazi lokhu okuhlukile indawo yemvelo.
Njengoba sishilo, iseKenya, eNarok County, nase Ibizwa ngegama lesizwe samaMaasai ohlala kule ngxenye yezwe futhi ngasemfuleni uMara. Ekuqaleni, ngawo-60 ngenkathi iKenya iseseyikoloni, yabekwa njengendawo yokugcina izilwane zasendle.
Kamuva leyongcwele yanwetshwa ukuze ihlanganise ezinye izindawo izilwane ezazisebenzisa ukuhamba phakathi kweMara neSerengeti. Ingqikithi ithatha cishe amakhilomitha-skwele ayi-1.510, nakuba ngaphambili lalilikhulu. Kunezindawo ezintathu ezinkulu, iSekenani, iMusiara neMara Triangle..
Indawo ebekiwe ibonakala ngeyayo Izimbali nezilwane. Izimbali zine-acacias nezilwane, yize zihlala kuso sonke isiqiwi, zigxile kakhulu lapho amanzi akhona nasengxenyeni esentshonalanga yesigcini. Lapha ngokuyisisekelo kuhlala izilwane okufanele zonke ikhadi leposi e-Afrika zibe nazo: amabhubesi, izingwe, izindlovu, izinyathi kanye ama-rhinoceroses. Kukhona futhi izimpisi, izimvubu kanye nengulule futhi, inkonkoni. Kunezinkulungwane zazo.
Sengeza izinsephe, amadube, izindlulamithi namakhulu ezinhlobo zezinyoni. Futhi yini engenziwa izivakashi esiqiwini? IMasai Mara ingenye yezindawo ezithandwa kakhulu izivakashi eKenya ikakhulukazi nase-Afrika jikelele. Ukuhambela kuvame ukugxila eMara Triangle okuyilapho izilwane zasendle zigcwele kakhulu.
Le ndawo ingamamitha ayi-1.600 wokuphakama futhi unenkathi yemvula esiqala kusukela ngoNovemba kuya kuMeyi, ngenani eliphakeme lemvula phakathi kukaDisemba noJanuwari naphakathi kuka-Ephreli noMeyi. Isikhathi esomile sisukela ngoJuni kuya kuNovemba. Izinga lokushisa eliphakeme licishe libe ngu-30º C bese ubuncane bube ngu-20º C.
Ku-Mara Triangle kufinyelelwe yimigwaqo emibili yezindiza ihlale ivulekile, noma ngabe isimo sezulu sinjani. NgoMara Serena noKichwa Tembo. Umgwaqo omkhulu wokungena unqamula iNarok neSango iSekenani. Kule ndawo kunikezwa indawo yokuhlala.
Uma unemali, kunendawo yokuhlala ebizayo, efana neMara Serena enikezela ngemibhede engu-150 entofontofo noma iKamu Lombusi Omncane, enemibhede kanokusho engama-36. Lezi zindawo ezimbili zokuhlala yizo zodwa ngaphakathi kweMara Triangle. Onqenqemeni kukhona iMpata Club, Olonana, Mara Syria, Kilima Camp neKichwa Tembo.
Isikhathi esihle sonyaka sokuhamba ku-safari siphakathi kukaJulayi no-Okthoba, ngesikhathi sokufuduka. Ekuqaleni kukaNovemba noFebhuwari kukhona nezigcawu zemvelo ezimangalisayo, kepha uma ungahamba ngalezo zinyanga kungcono. Bese kuba nokuhamba ngezimoto ebusuku, ukuvakashelwa ezigodini zaseMaasai ukuyofunda ngesiko lalaba bantu, izindiza zamabhaluni, izidlo zangaphansi kwezinkanyezi ...
AmaMasai noma amaMaasai angesinye sezizwe eziyizifanekiselo zase-Afrika. Lesi sizwe esiyimizulane ngokwesiko sizinikele ekwaluseni futhi saziwa kakhulu ngezingubo zaso zendabuko ezibomvu namashuca anemibala, umhlobiso wemizimba yabo. Isiko lase-Afrika nezilwane zase-Afrika, inhlanganisela enhle kakhulu lapho ucabanga ngokuya ku-safari.
Uma sicabanga-ke ngesafa, indawo ebekiwe inikela ngesipiliyoni esihle kakhulu ngoba njengoba sishilo sinazo zonke izilwane eziyizifanekiselo ezwenikazi. Labo Big Big baphenduka inkathi yokufuduka, ngoJulayi kuya kuSepthemba, bangene kwi-Big Nine, kodwa-ke, i-safari yinhle noma kunini. Khona manje Sebevele bathatha ukubhuka kwe-safaris ka-2021 no-2022, kusuka ezishibhile kuya kokunethezeka.
Lezi safaris zingaba ngomhlaba noma ngendiza. I-safaris yomgwaqo ithandwa kakhulu futhi ngokuvamile qala bese uphela eNairobi. Ngokusobala, ezimotweni ezi-4 × 4 noma kumabhasi amancane. Uhambo phakathi kweNairobi neMasai Mara kuthatha amahora aphakathi kwamahlanu kuya kwayisithuphas, kuya ngokuthi iyiphi indawo ozohlala kuyo ngaphakathi kwesiqiwi. Ubuhle bokwenza lolu hlobo lwe-safari ukuthi kushibhile kune-safari yendiza nokuthi ungabona izingqimba zaseKenya kumuntu wokuqala futhi usondele kakhulu. Okubi ukuthi uhamba ngomhlaba ...
Amanani? Amanani ziyehluka kuye ngobude besikhathi sohambo, kepha i-safari ngomzila, inguqulo yezomnotho, isuka kuma-dollar ayizi-400 kuye kwangama-600; Uhlobo oluphakathi kuze kufike ku- $ 845 nohlobo lokunethezeka kuze kufike ku- $ 1000.
Ku-safari yezinsuku ezine, amanani aqala ku- $ 665 bese enyukela ku- $ 1200 (inguqulo ephakathi), kuze kufike ohambweni lokunethezeka olungakhuphukela ku- $ 2600. I-safari yezinsuku ezinhlanu iphakathi kuka- $ 800 no- $ 1600 njalonjalo, kuze kufike ezinsukwini eziyisikhombisa ze-safari. Isonto le-safari linezintengo ezilingana nezicishe zifane nezohambo lwezinsuku ezinhlanu nesithupha, ngakho-ke uma unesikhathi isonto lonke lilungele.
Manje maqondana ne- indiza safaris noma iFlying Safaris, nazo zilula kakhulu ngoba ngendiza ujoyina iNairobi neMasai Mara ngehora elilodwa. Kukhona izindiza kabili ngosuku futhi uma uhamba ekuseni ufika enkanjini ngesikhathi sedina. Amanani? I-safari yendiza yezinsuku ezimbili ibiza phakathi kuka- $ 800 kuya ku- $ 950, i-safari yezinsuku ezintathu phakathi kuka- $ 990 no- $ 1400, ne-safari yezinsuku ezine phakathi kuka- $ 2365 no- $ 3460.
Noma ngabe ukhetha uhlobo oluthile lwe-safari noma olunye, izimoto ezisetshenziswa emhlabeni zizinhlobo ezimbili, lezo ezigunyaziwe: iToyota Landcruiser jeeps namabhasi. Bobabili banophahla olungavulwa ukucabangela umhlaba wase-Afrika futhi bobabili banemisakazo ebagcina bekhulumisana nabaqaphi bepaki. Ukunikezwa kwendawo yokuhlala kuhlukahlukeneKonke kuncike kwisabelomali, unezinkambu eziyizinkanyezi ezinhlanu nezinye ezilula ngisho nezindlu eziqashisayo ezizimele.
Ngakho-ke ngokuyisisekelo i-safari eMasai Mara Reserve ingafaka ukugibela i-jeep, izindiza zamabhaluni, ukuvakashela amadolobhana amaMasai, ukuhamba ngezinyawo, ukugibela amahhashi nokudla kwakusihlwa kothandos ngaphansi kwezinkanyezi ezinkundleni zekamu. Kukwazi, ukubona kuqala izilwane zase-Afrika kanye namathafa.
Ulwazi olulodwa lokugcina, kukhokhwa imali yokufaka endaweni ebekiwe Kuzoya ngokuthi indawo yokuhlala oyikhethile ikuphi. Uma uhlala ngaphakathi, ukungena kungamadola angama-70 ngomuntu omdala ngamahora angama-24 no-430 wezingane ezingaphansi kweminyaka eyi-12. Uma kungenye indlela, uhlala ngaphandle kwesibekeli esiyinhloko, ukungena kuzobiza u- $ 80 amahora angama-24 kanye no- $ 45 ngengane ngayinye.
Leli zinga lisebenza ohlangothini lweNarok naseMara Conservation, ephaseji esentshonalanga yesigcino. Ngenhlanhla lezi zindleko afakiwe entengo yokugcina ye-safaris.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba Zokuhamba » Afrika » Kenya » IMasai Mara, indawo okuyiwa kuyo e-safari
Ipaki Yemvelo yeLiencres